Akukho mculo ungxolayo walo naluphi na uhlobo.
Ukuba uthanda indawo epholileyo yokuphumla, le yindawo yakho. Le ndawo ayikwazi ukubamba amatheko, okanye idibane nalo naluphi na uhlobo. (Ukuba uthanda umculo wakho ngokuvakalayo kunye nobusuku obubusuku, ke le ndawo ayifanelekanga loo nto.) Iyunithi yakho ikwisakhiwo esinenye indawo yokuthengisa kunye nabanye abaqeshi. Wamkelekile kwindawo kaHarry, ezinikele kwilungu elithathelwa ingqalelo kakhulu kunye nempembelelo enkulu kuyilo lwedolophu eyimbali awayibiza ngokuba likhaya.
Asinakukwazi ukujonga kwangoko konke konke.
Akunakubakho mntu wumbi ngaphandle kweendwendwe ezicetyisiweyo zaza zaqinisekiswa kwiwebhusayithi/iapp ka-Airbnb. Ngokupheleleyo akukho maqela okanye iziyobisi ezingekho mthethweni zalo naluphi na uhlobo.
Kwakhona isakhiwo sisakhiwo esidala ngoko ke iindonga zincinci kunezakhiwo ezininzi zangoku. Sibonelela ngeeplagi zendlebe ukuba kuyimfuneko. Kukho abantu abangaphezulu kwakho. Kwaye isakhiwo sinombono webhulorho ye-123 enokuthi ibe yingxolo kunye nokuhamba. (Ngoko ke unombono ongaphezulu wesona sakhiwo.)
Indawo kaHarry kunye ne-Ann's Place yabelana nge-thermostat enye
4.85 · Izimvo eziyi-252
Indawo isembindini weOccoquan. Kanye kuhola wendlela u-95 eMzantsi kunye no-95 eMantla kunye nendlela engu-123 ngokunjalo. Iluncedo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ungathumela umyalezo nge-Airbnb.